अष्ट्रेलियाको टुरिष्ट भिसा एक घण्टामै ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको टुरिष्ट भिसा एक घण्टामै !
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०७:०६ |
मेलबर्न । नेपालीहरुमा पनि अहिले घुमफिरको संस्कृति शुरु भएको छ । विभिन्न देशहरुमा घुम्न जाने नेपालीहरुको संख्या बढेको छ । यस्तै अहिले नेपालीहरु विभिन्न देशमा विभिन्न भिसामा पुगेका छन् । ती देशहरुमा अष्ट्रेलिया पनि पर्दछ । अष्ट्रेलिया विशेष गरि नेपाली विद्यार्थीहरुको मूख्य गन्तव्यस्थल बनेको छ । त्यति मात्र होइन अष्ट्रेलिया घुम्न आउने नेपाली पर्यटकहरु समेत बढेका छन् । अझ अष्ट्रेलियामा आफ्ना नातेदार भएकाहरुलाई पर्यटन भिसा निकै सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ ।
बर्षिक सरदर २० हजार नेपालीहरू अष्ट्रेलियामा आउने गरेको तथ्यांकले जनाउदछ । पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया आउने क्रम अझै बढिरहेको छ । पर्यटक भिसामा यहाँको हाइ कमिसनले त्यति कडाई पनि गरेको छैन ।
अष्ट्रेलिया आउन चाहने सबैले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । पर्यटन भिसालाई अझ सहज र छिटो बनाउन अष्ट्रेलियाको इतिहासमै अपनाइएको यो छोटो प्रक्रिया हो । यस अघि पर्यटक भिसा प्राप्त गर्न कम्तिमा दुई दिन लाग्ने गर्दथ्यो । तर अहिले आवश्यक कागज पुर्याएर आवेदन दिएको एक घण्टामै भिसा उपलव्ध हुन्छ ।
यसमा ५ सय ५० डलर प्रतिव्यक्ति खर्च लाग्छ । कोही आफन्त ल्याउन चाहेमा उनीहरूले थप तीन सय डलर शुल्क तिर्नुपर्दछ । त्यसवापत अष्ट्रेलियन हाइ कमिसनले एक सय ३० डलर शुलक लिने गर्दछ । विदेशबाट आवेदन दिनेहरूका लागि अनलाइन भिसा सेवाले निकै सजिलो बनाएको छ । नेपालमा पनि अनलाइन संस्कृतिको विकास बढेसँगै अष्ट्रेलियाको पर्यटन भिसाका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिनेको संख्या बढेको छ ।
पर्यटन भिसा आवेदनका लागि आवश्यक कागजातहरू :
पर्यटन भिसा आवेदनका लागि पासपोर्ट, जन्म दर्ता, ट्रान्सलेटेड नागरिकता, फोटा, मेडिकल जाँच, स्वास्थ्य बीमा, अष्ट्रेलियाबाट आफन्तले मगाएको कागज, स्पोन्सरको नाता खुल्ने नाताप्रमाणित, इन्कम सोर्स, स्वदेश फकर्ने ग्यारेन्टी खुल्ने कागजात, सपोन्सरको भिसा स्ट्याटस खुल्ने कागजात, फ्यामिली ट्रि लगायतका कागजातहरू अत्यावश्यक हुने छ ।
त्यसका अलावा अष्ट्रेलियामा रहेका आफन्तहरूले एक जनाको लागि पाँच देखि सात लाख रूपैयाँ आफ्नो खातामा राखेर आफ्ना मानिसहरूलाई यहाँ बोलाउन सक्छन् । त्सस्तै यहाँको हाइकमिसनलाई यहाँ आएको मान्छे फर्कन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भने प्रत्याभूत हुनुपर्दछ ।
Previousकाँग्रेसकै आह्वानमा अनिश्चितकालीन पाल्पा बन्द
Nextसुनखानी भेटिएको आशंकामा मेलम्चीको काम रोकियो
अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्डमा डेब्रीज आँधीको विध्वांश (अपडेट)
१५ चैत्र २०७३, मंगलवार ०१:३५